Uyifaka njani indawo ye KDE desktop kwi-Ubuntu 18.04 LTS? | Ubunlog
Ubumnyama | | KDE
Maxesha amaninzi ayingabo bonke abasebenzisi abonelisekileyo yimeko-bume ye-desktop ene-Ubuntu ngokwakhona, ethi yona ikwinguqulelo yokugqibela yenze utshintsho ukusuka kubumbano ukuya kwi-Gnome. Oluphi olu tshintsho lube kukudana kubasebenzisi abaliqela.
Kodwa ngaphandle, kwelinye icala, njengoninzi lwabasebenzisi be-Ubuntu siyazi ukuba oku kusasazwa kuneencasa ezahlukeneyo ezagubungela ezona ndawo zidumileyo zedesktop. Inikwe imeko kunye gEnkosi kukhetho olukhulu lokhetho olwenziwe yiLinux, sinokutshintsha ukubonakala kwenkqubo yethu kukhetho lwethu kunye nokukhetha kwethu.
Yiyo loo nto namhlanje Siza kwabelana ngee-newbies ngeendlela ezimbini zokufumana imeko-bume ye-KDE Plasma desktop kwi-Ubuntu 18.04 yethu okanye kwezinye izinto ezivela kuyo.
1 Malunga nokusingqongileyo kwe-KDE Plasma desktop
2 Faka i-Kubuntu Desktop kwi-Ubuntu 18.04 LTS kunye neziphumo
3 Faka i-KDE Plasma kwi-Ubuntu 18.04 LTS kunye neziphumo
Malunga nokusingqongileyo kwe-KDE Plasma desktop
Kwabo abangayazi le ndawo intle kangaka ndingakuxelela Le bume yindawo enesicelo esikhulu kunye nesiseko sophuhliso yeenkqubo ezahlukeneyo zokusebenza ezinje ngeGNU / Linux, Mac OS X, Windows, njl.
Izinto eziphambili zesoftware eveliswe yi KDE zihlelwe phantsi kwegama le KDE Frameworks, KDE Plasma kunye KDE Izicelo.
Izicelo ze KDE zisebenza ngokupheleleyo ngokwendalo kwi-GNU / Linux, BSD, Solaris, Windows, kunye neMac OS X.
Xa sele nditshilo, Kubalulekile ukwazi ukuba ngeendlela ezimbini esinokufumana ngazo i-KDE Plasma kwinkqubo yethu kukho umahluko omkhulu.
Entre Olukhetho lokufaka esiza kwabelana ngalo, siya kuba nakho ukufumana i-Kubuntu Desktop kunye nephakheji yokufaka ye KDE.
Nangona kwithiyori ziyafana kuba iyi "KDE" ezi phakheji zinomahluko omkhulu.
Faka i-Kubuntu Desktop kwi-Ubuntu 18.04 LTS kunye neziphumo
Le pakethi yokuqala esinokufaka ngayo i-KDE kwinkqubo yethu yile inikezelwa yi-KDE Plasma desktop desktop nangaphezulu iza kuhlanganiswa nazo zonke iipakethe zokucwangciswa kunye nokwenza ngokwezifiso ezifakiwe kwiBuntu.
Ukuze ufake le phakheji kufuneka sivule i-terminal nge-Ctrl + Alt + T kwaye senze oku kulandelayo:
Xa ufaka esi sixhobo Siya kuba nakho ukufaka konke ukuxhomekeka kwePlasma yePD kwi-Ubuntu.
Uyenzile ngoku siyaqhubeka ukufaka iphakheji ye-Kubuntu Desktop kwinkqubo yethu ngalo myalelo ulandelayo:
Ngexesha lofakelo lwenkqubo yazo zonke iipakeji zokumiselwa kwephakheji, siya kucelwa ukuba sikhethe ukuba siyafuna gcina umphathi wokungena okungagqibekanga esinako okanye ukuba sikhetha ukuyitshintshela kwimeko ye-desktop eyi-KDM.
Yenza le nto Ekupheleni kofakelo sinokuqhubeka nokuvala iseshoni yethu yomsebenzisi kwaye siyabona ukuba umphathi utshintshile.
Ngoku Sinokukhetha ukuqala iseshoni yethu yomsebenzisi ngendawo entsha ye KDE desktop.
Singaqaphela ukuba ezinye zeenkqubo ezingagqibekanga zitshintshiwe ngoko ke zafakwa kunye ne-KDE Plasma.
Faka i-KDE Plasma kwi-Ubuntu 18.04 LTS kunye neziphumo
Enye indlela yokukwazi ukufumana okusingqongileyo Idesktop yePlasma ye KDE kwinkqubo yethu ngofakelo oluqhelekileyo lobume be desktop, esinokuthi sifumane kuyo kuphela imeko-bume kwinkqubo yethu kunye nolungelelwaniso oluncinci.
Olu khetho lulunge kakhulu ukuba ufuna ukupholisha imeko-bume ngendlela othanda ngayo kwaye ayixhomekekanga kuqwalaselo lwabanye.
Ukufakela le phakheji kufuneka sivule i-terminal kunye neCtrl + Alt + T kwaye siya kuyenza kuyo:
Ekupheleni kofakelo kuphela Kuya kufuneka sivale iseshoni yethu yomsebenzisiNgokungafaniyo nephakheji yangaphambili nale, siza kuhlala sigcina umphathi wethu wokungena.
Kuphela Kuya kufuneka ukhethe ukungena ngemvume kwindawo entsha yedesktop esisandula ukuyifaka.
Okokugqibela, nayiphi na kwezi ndlela zimbini ziyasebenza ukuze zikwazi ukufumana i-KDE Plasma kwinkqubo yethu, umahluko uphakathi kokufumana imeko-bume eyenzelwe wena ngakumbi okanye enye kwi-vanilla state, ngokutsho oko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » KDE » Uyifaka njani indawo ye KDE desktop kwi-Ubuntu 18.04 LTS?
Ukuba ndiyakwenza oku, ngaba isekhona iminyaka emihlanu yenkxaso, nokuba ndisebenzisa i-KDE?
Kuba ukuba ndifaka kubuntu kuneminyaka emithathu kuphela
Ewe ndikhangele ngokuchasene nenqaku, Oko kukuthi, ndifuna ukubuyela kwi-Ubuntu desktop endicinga ukuba yiGnome, kodwa ukuza kuthi ga ngoku khange ndikwazi ukuyiphumeza. Kuyenzeka ukuba kwi-Kde plasma, bathathe indawo yeziko lokukhuphela isoftware Ubuntu ngenye ye-Kde, ethi incasa yam ikude ekufezekiseni inqanaba loBuntu. Ewe ukuba kukho umntu onoluvo olurhabaxa okanye owaziyo ukubuyela kwi-plasma ukuya kwi-gnome nceda wabelane. Ukuba ndifumana indlela, ndiza kwabelana ngayo ukuba yenziwe njani. Ukubulisa.